डाक्टरले मृत घोषित गरेको आठ घण्टापछि अचानक ब्युँतिन् एक महिला ! उपस्थित सबै मानिसहरु दंग परे, केही त आतकिंत भए । – Etajakhabar
डाक्टरले मृत घोषित गरेको आठ घण्टापछि अचानक ब्युँतिन् एक महिला ! उपस्थित सबै मानिसहरु दंग परे, केही त आतकिंत भए ।
मृत घोषित गरिएकी बिरोदेवीको अन्तिम संस्कारको तयारी चलिरहेको थियो । परिवारजन विलाप गरिरहेका थिए । यहीबीच उनी उठेर बसेको हुन् । घटनापछि बिरोलाई राखिएको सिविल अस्पतालमा हेर्न उनलाई जाने मानिसहरुको भीड लागेको छ ।
मृत्यु भएको बिरोदेवीलाई परिवारले घर फिर्ता लिएर आए । घर फर्काइसकेपछि परिवार अन्तिम संस्कारको तयारीमा लागे । आठ घण्टासम्म मृतकका नातेदारहरु आउने क्रम जारी रहेकाले लास उठाइएको थिएन । आठ घण्टासम्म उनका आफन्तहरु उनको अनुहार अन्तिम पटक हेर्न आइरहेको थिए । यही क्रममा जब एक जना नातेदार महिलाले रुँदै आफ्नो हात केही जोडले बिरोदेवीको छातिमा राखिन् तब उनको सास चल्न थाल्यो । त्यसपछि बिरोदेवी उठेर बसिन् । त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसहरु दंग परे । केही त आतकिंत भए ।
सिभिल अस्पतालको हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनजिन्दर सिंह बब्बरका अनुसार ईसीजीको रिपोर्ट प्लेन नआएसम्म बिरामीहरुलाई मृत घोषित गर्न सकिँदैन । बिरोदेवी सुगरको बिरामी हुन् । उनी सिभिल अस्पतालमा पहिले पनि उपचारको लागि आइरहेकी थिइन् । त्यो दिन बिरोको शूगर लेबल एक्कास्सी कम भएर उनी बेहोस भएको हुन सक्छिन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २५, २०७५ समय: २०:२२:१५